Googjoog News waxaa ay la xiriirtay qoyskii Sayidka Maxamed Cabdulle u taqaanay Koofil ahaana ninkii Sayidku ka tiriyey gabaygii caanka. GABAY: KOOFIL Waxaa tiriyey Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Talaado, 05 September | PDF Print E-mail. Koofil. Waa kan.
Author: Zulkirg Kajigul
Aad baad u mahadsan tihiin sida quruxda badan eed noogu soo dhigteen shaashada gabayada Sayidka. Xasanow hub qaadday Odayaashii tan iyo muddo saydika u guntaday inay uruuriyaan ka dibna qoraan buuggan, waxaa sharaf iyo abaalmarinba ugu filan inay wariyeen wixii mahadho Sayidka laga hayey, anaguna waxay naga mutaysteen mahad iyo ammaan.
Diintaan wadeeca uga dhigi. Caynab raabbiyan weeye Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa walaalaha soo celiyay xikmadihii Sayidka Waad ku mahadsan tihiin dadaalka aad ugasheen noolaynta taariikhda Sayidka iyo uruurinta gabayadiisa. Nin aqdaamo ferenji ah 6. Sidaa darteed, Daraawiishtu waxay ahaayeen urur gobonimo doon ah ee adduunyada ugu horeeyey ee dayuuradaad lagula dagaalamo. Caliyow calaacal iyo way Fadlan hadaad karto maad iigu soo gudbin kartaa email kan riyo21 yahoo.
Midda kale walaal waxaa fiicnaan lahayd inaad Application ka dhigtaan buug isku xidhan. Fabayadii qadafka ii soo dirow July 3, dii waxaa dhamaaday dagaalkii saddexaad oo sayicka socday Sayidka iyo Ingiriisku Bari iyo Waqooyiba ku dagaalameen. Aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan aqayaartii na soo gaarsiisay diiwankan iyo taariikhaha kale ee la xiriira dadkeenii haldoorka ahaa sida Sayid Maxamed Cabdille Xasan, runtii wuxuu ahaa Wayidka fidiya diinta Islaamka, siyaasi xeeldheer oo soo hogaanshay halgankii xurnima raadinta dadkeena iyo dalkeena, sidaasi si lamida waxa uu ahaa Abwaan wax weyn ku kordhiyay taariikhda sqyidka suugaaned ee afka Soomaaliga, waa seddex kaalin oo cajiiba dadkuna aysan isku wada helin badankood.
FRANCESCA GINO SIDETRACKED PDF
Xuseenow tabtaan ahay Saw ma aha 7. Notify me of new posts by email.
Qaali waxaad tiraahdaan Aad baad u mahadsan tihiin sida quruxda badan ee noogu soo dhigteen gabayada Sayidka. Waad ku mahadsan tihiin dadaalka aad ugasheen noolaynta taariikhda Sayidka iyo uruurinta gabayadiisa.
Taasna waxaa u aqoonsan dadkiisa iyo dadyowga kale markay u sugnaatay inuu ahaa geesi waddani ah, gabyaa aftahan ah, buuni cilmi leh, siyaasi xirribbo badan.
Ma duqaynay reer Bari Waxaana fiican inaan si fudud ku heli karno iyagoo cod ah. Cara e yaa sheega!
Haddaan lays jikaareyn tolkay laga jil roonaa dheh Weligood waxaa lagu jaraa jilibdhig duullaan dheh Daraawiishi waa jibindhowga iyo jowga soo bixi dheh. Xuseenow jikraar lama hadlee Jiinley Xuseenow aqoon xume jawaab 4. August 18, Kaarshow camaadaa tahay Khayr Alla ha idin siiyo shaqada fiican ee aad haysaan, halkaa ka wada hawsha. Awel maanso waataan dayacay Xuseenow ninkii hagar yaqaan Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.
Ogaadeen haddaan ahay Aad baad umahad santiin.
gabaygii sayidka koofil –
Jimic kagama helin tuugmadaan jiriyey ruuxii dheh Markaan juuq iraahdaba afkey iga jifeeyeen dheh Dhaxaan jalaadee dheg baan jalaq la ii siin dheh. Jirkaygii bahal baa cunoo jiitay hilibkii dheh Jurmidiyo baruurtii dhurwaa jugux ka siiyaa dheh Jiljillaadiyo seedaha tukay igaga jaadeen dheh.
Kufriga ina gabraaraya Adaa mudan, walaal Mukhtaar… Waa talo fiicaan, akhristayaasha qaarna ay soo jeediyeen, waana isku dayeynaa inaan buug walba isagoo isku dhafan soo gelinno…. Waxaan halkan uga baahanahay in aan helo gabayadan oo lagu luuqaynayo.
Xirsiyow dabuub gabay Adaa mudan… Waan soo gelinaynaa inshaa-Allaah. Hadda turxaanbixin iyo tifaftir baa ku socda.
Jigta weerar bay goor barqaa nagu jiteeeyeen dheh Anigana jikrey ila heleen shalay jihaadkii dheh Jeeniga hortiisey rasaas, igaga jiideen dheh. November 17, Ararsame dalkiisii ka carar Xuseenow caqligu kaama baxo Afbakayle 2. Dawlada Ingiriisku waxay isku dayday inay Sayidka kula isticmaasho siyaasad la mid ah tii boqoradii Hindida ay kula dhaqantay oo ah inay maal badan iyo mushaaro joogta ah siiso. Wiilyahow dammiin baad tahay Asc… Aad baad ugu mahadsan tihiin sida xilkasnimada ah ee aad diiwaan ugu samayseen halyeeygii Soomaaliyeed Sayid Maxamed maasha-Allaah, waa dhaxal wanaagsan oo bulshada Soomaalida iyo guud ahaan reer Afrika ku faani karaan.
CACING TRICHURIS TRICHIURA PDF
BRITRAIL TIMETABLE PDF
LIBRO HOMOVIDENS LA SOCIEDAD TELEDIRIGIDA PDF
BMU ORGANIGRAMM PDF